ဘဝမှတ်တိုင်: Viber က Message တွေကို Backup လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ - Backup Text For Viber v.0.9.5 APK
Viber က Message တွေကို Backup လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ - Backup Text For Viber v.0.9.5 APK
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့တင်ဘဲ တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ Viber ကို သာသုံးနေကြတာပါ။ Message တွေကို Backup လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။ Phone ဒါမှမဟုတ် မိမိသုံးနေတဲ့ Viber Application သာတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ Install ပြန်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရင်တုန်း က Message အားလုံးပျောက်ဆုံးသွားမှာပါ။ မိမိတို့ရဲ့အမှတ်တရ အပြန်အလှန်ပို့ထားတဲ့ Message တွေက တကယ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ Backup Text For Viber လေးပေါ်လာတော့ မိမိတို့ရဲ့ အရေးကြီး တဲ့ Message တွေကို Backup လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဘယ်လောက်တောင်အဆင်ပြေသလည်းဆိုရင်ဗျာ။ Viber Messages တွေကို Text , CSV, Excel and HTML စတဲ့ Format များအဖြစ် Convert လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Message တွေကိုလည်း Print လုပ်ပြီးစာရွက်လေးနဲ့သိမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။ တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါ တယ်ဗျာ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော်။ Viber v3.0 နှင့်အထက်မှသာ အခု Application နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။ အသုံးပြုပုံကိုလည်း အအောက်မှာ Screen Shot ရိုက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Backup Text for Viber allows you to export your Viber messages, convert to Plain Text, CSV, Excel and HTML file formats and yes, those files can be read in your phone or computer!
Your exported files can be saved on your phone's SD card or sent to your email as attachment.
It is fast and easy to backup your Viber messages!♥♥ Your Viber need to be updated to version 3.0 or later
♥ Backup Text for Viber and SMS to Text share same file format. Using our app SMS to Text,
those export Viber messages can be restored to your phone as SMS
Backup Text for Viber export your messages, based on your Viber messages history backup.
Please follow the steps below, to make the up-to-date messages history backup:
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 12/05/2013 05:29:00 am